allsanaag.com - Madaxweynii Soomaaliya oo ka soo dhex muuqday New York
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3208	Days	05	Hours	32	Minutes	22	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Madaxweynii Soomaaliya oo ka soo dhex muuqday New York
Written by khalid	BAAFIN–Madaxweyne Xasan Sheekh oo ay ugu war dambeysey isagoo siyaaro Shaqsi ah ku aadey Mareykanka.
Safarkii uu Magaalada Muqdisho uga soo baxay Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa Jahawareer iyo isku dhexyaac ku ridey Dublamaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku Sugan Wadanka Mareykanka, kadib markey ku adkaatey iney helaan Xog sugan oo ku saabsan safarka Madaxweynaha, Cida marti qaadey iyo meesha uu ka soo dagayo.
Warar hadda soo gaarey Puntlandi ayaa sheegaya in uu Madaxweynuhu si lama filaan ah oo aan cidna ka warqabin uu galabta uga soo dhex muuqdey Garoonka Diyaaradaha JFK ee Magaalada New York, iyadoo ay halkaas ku soo dhaweeyeen Xubno ka tirsan Jaaliyada Soomaalida ee New York, ka dibna waxay u galbiyeen Madaxweynaha Hotel ay Jaaliyadu ugu talagashey inuu ku sugnaado Mudada uu joogo New york, arintaasoo lama filaan iyo yaxyax ku noqotey Diblomaasiyiinta Soomaalida ee ku sugan Cariga Maraykanka.
Warar aan ka soo xiganey xubno ka tirsan Jaaliyada Soomaaliyeed ee New York ayaa sheegay in booqashada Madaxweynuhu ay tahay mid shaqsi ah isla markaana uu taageero Siyaasadeed ugu raadinayo Dowlada Federaalka Soomaaliya, isagoo mudada uu jooga Maraykanka la kulmi doona Xubno ka tirsan Dublamaasiyiinta fadhiya Qaramada Midoobey Xaruntooda New york.
Maaha markii ugu horeysay ee Dowlada Mareykanku dhabarka u jeediso islamarkaasna ka gaabsato soo dhaweynta iyo marti qaadka Madaxda Soomaalida wixii ka dambeeyey burburkii Dowladii dhexe ee Soomaaliya.
Taa badalkeeda waxaa Caado iska noqotey in Qaramada Middobey Xarunteeda New york ay Marti qaado Madaxda Dowlad walba oo Soomaaliya looso dhiso.
Sidoo kale waxaa la rajeynayaa inuu Madaxweynuhu la kulmi doono Jaaliyadaha Soomaalida Mareykanka.
Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Somalia marwo Fowsiyo Yusuf Aaden iyo saraakiil ka tirsan Xafiiska Madaxtooyada.
Safarka Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa ku soo aaday waqti xarakada Al-Shabaab soo bandhigeen meydka la hayste Faransiis ah, Kaas oo laga daawaday dhamaan warbaahinta caalamka, taas oo waji gabax iyo shido ku noqon doonta madaxweynaha Soomaliya, marka uu la kulmayo bulshada caalamka.
Dowladda Faransiiska ayaa cambaareysay daabacaadda sawirka meydka ay soo bandhigeen kooxda Al-shabaab. Lama yaqaan sida uu noqonayo xiriirka diblomaasiyeed ee Dowladda Somalia iyo waddamada reer Galbeedka gaar ahaan Dowladda Fransiiska
Mar dhow naga fisha sawiradii sida ay jaaliyadda soomaliyeed ee New < Prev